Nrị elu nke ire ahia na 2015 | Martech Zone
Dị ka mkpebi Sirius si kwuo, 67% nke njem si zụrụ ahịa eme ugbua dijitalụ. Nke ahụ pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% nke mkpebi ịzụta ka emere tupu atụmanya ọbụlagodi ịmalite mkparịta ụka bara uru na ahịa. Ọ bụrụ na ị naghị enye uru tupu mmekọrịta mbụ ahụ na rep ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ọ gaghị abụ onye na-azọ mmasị ịhụnanya gị.
Dị ka anyị niile maara, n'ime ahịa a na-eto eto maka afọ ole na ole gara aga, ọ na-arụ ọrụ. Atụmanya na-azaghachi nke ọma n'ime ntaneti ahịa na omume ahịa na-agbanwe agbanwe, ebe ị na-eleghara ụzọ ọpụpụ ọdịnala anya. Mana nke a bụ naanị mmalite, na ụlọ ọrụ a ga-aga n'ihu na-agbanwe oge.
"N'ime ahịa na-agbanwe ngwa ngwa dabere na omume atụmanya, ndị nnọchi anya ahịa kwesịrị imeghari iji merie."
Salesvue, anyị ahịa akpaaka onye nkwado, ewepụtala infographic, Rrị elu nke Ahịa Ahịa na 2015, nke na-enyocha ahịa gara aga, ugbu a na ọdịnihu nke ahịa.
N'ime ahịa na-eto 300% ngwa ngwa karịa ahịa ndị ọzọ.
Dabere na Harvard Business Review, oku oyi anaghị arụ ọrụ 90.9% nke oge.
Ọpụpụ na-efu ụlọ ọrụ gị na-efu ego karịa n'ihi mbọ a na-ewe iji mechie ha.
Sellingre ahịa mmadụ ga-abụ ebe nkịtị.
Ele infographic n'okpuru maka ihe nghọta n'ime ahịa. Maka ozi ndị ọzọ gbasara Salesvue na ire ahịa akpaaka ha, rịọ ka ngosi taa.
Tags: b2b ahịan'ime ahịaInfographics Ahịaakpaaka ahịaNkwado ire ahịaahịa akpaakaahịa infographics